Telesom - Wikipedia
Telesom Shirkadda Isgaarsiinta ee Telesom Shirkadda Telesom waxa la aasaasay sanadkii 1999kii, waxana iska kaashaday saamiley ka badan 230 qof. Waxay shirkaddu rasmi ahaan u hawlgashay bishii November, 2001dii, Isla wakhtigaas Telesom waxa ay xarumo ka furatay gobolada iyo degmooyinka dalka, arrintaana waxa dardargeliyay adeegyo cusub oo ay shirkaddu ummadda iyo dalka u soo bandhigtay.
Calaamadda ka muuqata sawirkan waxaa weeye caalamada u gaarka ah ee shirkadda isgaadhsiinta ee Telesom
Ganacsi gaar ah
C/kariin Maxamed Iid (Gudoomiyaha)
Broadband, Mobile phone
Waa shirkada ugu wayn ee dadka ugu badan isticmaalaan Somaliland gudaheeda
Adeegyada Shirkadda Telesom waxa uu gaadhay oo si mudda kara ah uga tisqaaday miyi iyo magaaloba. Shirkaddu waxay ka hawlgashaa in ka badan 30 magaalo oo waawaeyn iyo 100 tuulo oo ku baahsan dhammaan gobolada Somaliland ka kooban tahay.
Adeegyada guud ee ay Telesom ka hirgelisay dalka waa: Landline-ka (Fixed line), GSM-ka (Mobile), Internet-ka,Adeegga 3G oo casr ah iyo Adeegga ZAAD.
Telesom waxay noqotay muraayad laga dheehan karo in dadku wax wada-yeelam karaan, taas oo keentay inay wax weyn ku biiriso dhaqaalaha, horumarka iyo shaqo abuurista dalka. Waxa kale oo ay shirkaddu qayblibaax ka qaadataa horumarka dalka iyada oo taageero joogto ah u fidisa hay’adda bulshada u shaqeeya sida jaamaadaha, cusbitaalada, waddooyinka, iwm.
1 Xarumaha Hargaysa
3 Sido kale firri
XARUNTA AXMED DHAGAX
XARUNTA JIGJIGA YAR
XARUNTA NEW HRG
XARUNTA JAAMACADA HRG
Tabarucaatka Bulshada Wararkii u dambeeyey
Sido kale firri
Liska Shirkad Somaliland/Somalia
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Telesom&oldid=208186"
Last edited on 3 Jannaayo 2021, at 21:02
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Jannaayo 2021, marka ee eheed 21:02.